सामान के हो? मुख्य अवधारणा | अर्थव्यवस्था वित्त
सामान ती सबै संग मिल्छ सामानहरू जुन भौतिक हो कि किन्न वा बेच्न सक्षम छैन, त्यो भनेको व्यावसायिकिकरण हो। कहिलेकाँही सामानलाई सन्दर्भ गर्नको लागि सामानको नाम प्रयोग गर्न सकिन्छ, दुबै पूर्ण रूपमा मान्य र पर्यायवाची छन्। सामानहरू व्यापार गर्न सकिन्छ कि उद्देश्य को लागी आर्थिक सामानहरु को रूप मा मानिन्छ। तिनीहरू सामान्यतया आर्थिक गतिविधिको आंशिक वा कुल हिस्सा हुन् जसमा यसलाई विकास र एक्सचेन्ज गरिन्छ। यो यस पक्षको लागि हो कि खरीददारहरू र व्यापारीकहरूले उनीहरूको स्वभाव र रूचि अनुसार उनीहरूको व्यावसायिक र आदानप्रदान सम्बन्धको आधार दिन्छ। यो चासो व्यापारको विशेषताहरु वा कम्पनीहरु द्वारा अनुसरण गरिएको उद्देश्यबाट आउन सक्छ।
एक राम्रो बन्ने क्षमता छ कि व्यापार गर्न सकिन्छ व्यापारलाई माललाई व्यापारलाई उत्साहित गर्ने र अर्थव्यवस्थालाई काम गर्ने वस्तुको रूपमा मानिन्छ। तिनीहरूसँग सबै भौतिक चीजहरू समावेश हुन्छन् जस्तै कच्चा माल (तामा, जई, फलाम ...) वा गैर-भौतिक सामानहरू (प्याटेन्टहरू, इजाजतपत्रहरू, यहाँसम्म कि कम्पनीको सेयरहरू)। व्यापारिक वस्तुको मान समयसँगै घट्न सक्छ र तिनीहरूको मूल्यहरु मा देख्न सकिन्छ। कारकहरू जुन तिनीहरूलाई प्रभाव पार्न सक्दछन् सामान्यतया त्यस समयमा बजारको अवस्थाबाट। कुन कारकले उनीहरूको मूल्यलाई असर गर्छ भनेर जान्नको लागि, यदि तिनीहरूले माथि वा तल वा कम्पनीको महत्त्व अनुसार असर गर्न सक्दछन्, पढ्न जारी राख्नुहोस्। आजको लेख वस्तुलाई नजिकबाट हेर्ने र तिनीहरूलाई समग्रमा बुझ्ने बिभिन्न बिन्दु र त्यसमा रुचि राखी तिनीहरूबाट बुझ्नको लागि हो।
1 वस्तुको मूल्यलाई असर गर्ने कारकहरू
2 सामानहरू व्यवसाय दृष्टिमा निर्भर छन्
2.1 व्यापार को स्थिति मा निर्भर गर्दछ
वस्तुको मूल्यलाई असर गर्ने कारकहरू
सामानको मूल्य उच्च वा सस्तो रहन सक्छ, तर प्राय जसो केसहरूमा उनीहरूको मूल्यहरू समयको साथमा उतारचढाव हुन्छ। यो सबै तिनीहरूमा हस्तक्षेप गर्ने बिभिन्न कारकहरूमा निर्भर गर्दछ। सब भन्दा उल्लेखनीय निम्न हो:
यसको प्रशस्तताको लागि। ती कम प्रचुर मात्रामा सामानहरू महँगो हुन जान्छन् किनकि त्यहाँ कम र अधिक मूल्यवान सामानहरू छन्। यदि केहि उत्पादनहरूको निर्माणमा यो आवश्यक सामान पनि हो र उनीहरूसँग विकल्प छैन भने, यो मूल्य अझ बढ्नको लागि कारण गर्दछ। यसको विपरित, कम निर्माण वा व्यावासायिककरणमा रुचि कम मांगको कारण यसको मूल्य कम हुनेछ। यो पनि सामान को कुल उपलब्धता गणना हुनेछ। उदाहरणको लागि, प्यालाडियम (उदाहरणका लागि उत्प्रेरक रूपान्तरणकर्ताहरूमा प्रयोग गरिएको) धेरै दुर्लभ छ र यसको मूल्य उच्च छ, जबकि पानी धेरै प्रशस्त छ र यसको मूल्य कम छ।
यदि ती विकल्पहरू छन्। माथि उल्लेखित संग लाइन मा। यदि सामानहरू निर्माण, विस्तार वा बिक्रीमा उनीहरूको विशेषताहरूको कारणले आवश्यक छ भने, तिनीहरूसँग सामान्यतया उच्च मूल्य हुन्छ। विशेष गरी यदि अन्य सामानहरू तिनीहरूको विशेषताको कारण प्रयोग गर्न सकिँदैन, त्यो बहिष्कारले उनीहरूलाई मूल्यवान बनाउँदछ। उदाहरण को लागी सुन। यदि, थप रूपमा, एक नयाँ राम्रो देखा पर्‍यो जुन व्यवसायिकरण हुन सक्दछ, जसले धेरै माग पनि उत्पन्न गर्दछ, र केवल सुनको साथ मात्र बनाउन सकिन्छ, जसको कारण मूल्य अझ बढि बढ्नेछ।
बहिष्करणको लागि। यी बहिष्करण अधिकारहरू सामान्यतया प्याटेन्टहरू वा ट्रेडमार्कमा जिम्मेवार हुन्छन्। यी वस्तुहरू वा सेवाहरू मार्केट गर्न यी प्रतिबन्धहरूले ती सामानहरूलाई पनि बढाउँछ वा मूल्य घट्छ। उदाहरण को लागी, एक इजाजत पत्र केहि बर्षको लागि वैध हुन सक्छ, पेटन्ट जस्तै, र "मुक्त लगाम" दिनुहोस्।
रसद प्रयोग गरियो। सामानको मूल्य यातायात, भण्डारण, तिनीहरूको उत्पत्ति स्थान, इत्यादिको अधीनमा हुन सक्दछ। यी सबै पूर्वाधार र उनीहरूसँग बजारमा रसदले व्यापारको अन्तिम स्थानमा निर्भर गर्दै मूल्य बढाउन सक्दछ। त्यहाँ यस्तो समय आउँछ जब केही सामानको विशेषता र मूल्यमा निर्भरता कम्पनीहरूले आफ्नो रणनीति परिमार्जन गर्न सक्दछन् यदि उनीहरूलाई आफ्नो आर्थिक क्रियाकलापको लागि धेरै वा थोरै चाहिन्छ भने। यसले हामीलाई अर्को बिन्दुमा ल्याउँछ।
सामानहरू व्यवसाय दृष्टिमा निर्भर छन्
माल उच्च वा कम मूल्य हुन सक्छ कि माथिको कारकहरु मा निर्भर गर्दछ। जहाँसम्म, "अन्तिम शब्द" अधिक प्रदान गर्न सकिन्छ कि व्यापार दृष्टिकोण मा निहित छ। त्यो बजार एक मार्केटिंग अधिक लाभदायक हो वा एक कम्पनी को लागी, छैन यो तपाइँको मुनाफा मार्जिनमा निर्भर गर्दछ। यदि सामानको प्राप्त मूलबाट अत्यधिक प्रभावित छ भने, एक कम्पनी (र यसको आकारमा निर्भर गर्दै) सार्न सक्दछ यदि यस तरिकाले यसको उत्पादन अधिक कुशल र लाभदायक बन्छ भने। यसको विपरित, तपाइँको उत्पादन वा माल की बिक्री को लागी प्रभावित वा पुरस्कृत हुन सक्छ, यसको वितरण को सहजता को आधार मा। यी रणनीतिक परिवर्तनहरूको बारेमा निर्णय प्रत्येक व्यवसायको दृष्टिकोण र उद्देश्यमा निर्भर गर्दछ।
यो रणनीति र व्यवसायिक दृष्टि यो विस्तार गर्न आउँदछ कि कुन सीमासम्म माल आवश्यक छ वा छैन, यस क्षेत्रको साथ जारी राख्न, वा यसको उल्टोमा आफैलाई पुनर्व्यवस्थित गर्न, लाभदायकमा निर्भर गर्दछ जुन यसले यसको अन्तिम बिलि fromबाट प्राप्त गर्न सक्छ। यसले यसको लागि भुक्तान गरिएको मूल्यलाई पनि प्रभाव पार्दछ र नतीजाको रूपमा, नयाँ विकल्पहरूको लागि खोजी गर्दछ। सब भन्दा चरम मामला मा, कुनै मूल्य संग एक मार्जिन संग वा अधिक मूल्य संग एक वा अधिक वस्तुहरु संग वितरण गर्न को लागी, कम्पनी आफ्नो व्यवहार्यता र आर्थिक मोडेल को बारे मा धेरै स्पष्ट हुनु पर्छ।
व्यापार को स्थिति मा निर्भर गर्दछ
अन्तमा, सबै व्यवसायहरूले तिनीहरूको उत्पादनहरू प्रदान गर्दैन वा उनीहरूको सामानहरू समान मूल्यमा मार्केट गर्दछन्। एक क्षेत्र विनियमित मूल्यको साथ हुन सक्छ (उदाहरणका लागि स्पेनमा सुर्तिजन्यको), तर सामान्य नियमको रूपमा कम्पनीले प्राय: मूल्य निर्धारित गर्दछ। यसले बनाउनेछ कि कहिलेकाँही व्यापार को प्राप्त वा वितरण अधिक वा कम लाभदायक हुन सक्छ। यदि कारोबार उच्च नाफा मार्जिनको साथ उच्च छ भने, उदाहरणका लागि एप्पल अन्य स्मार्टफोन कम्पनीहरूको तुलनामा, यसमा पैतृक कोठाको अधिक ठाउँ छ।
अर्को उदाहरण सुन निकासीको लागि समर्पित कम्पनीको हुन सक्छ। सबै औंस सुन प्राप्त गर्न एकै बजेट लगानी गर्दैन। ती खनिकहरूले जसको बजेट उही रकम प्राप्त गर्न कम छ उनीहरूले सुनको मूल्यमा गिरावट देख्न सक्दछन् र यदि उनीहरू कम लाभान्वित भए पनि तिनीहरू जारी रहनेछन। अर्कोतर्फ, जसले सुन निकासीमा धेरै लगानी गर्नुपर्दछ, उनीहरूले पहिलो कष्ट भोग्नुपर्नेछ यदि उनीहरूले देख्यो कि कच्चा मालको मूल्य उनीहरूले वितरण गर्न चाहन्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » negocios » कम्पनीहरु » सामान के हो? मुख्य अवधारणाहरू
एसएमएस द्वारा काम जीवन अनुरोध गर्नुहोस्
रोजगार अनुप्रयोग नविकरण गर्नुहोस्